HomeWararka CiyaarahaDele Alli ma ka tagayaa Everton xagaagan?
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Everton Dele Alli ayaa lagu soo waramayaa inuu damacsan yahay inuu ka baxo Goodison Park, ka dib lix bilood oo uu ku sugnaa Merseyside.
26 jirkaan ayaa Toffees kaga soo biiray Tottenham Hotspur bishii Janaayo, laakiin, marka loo eego shuruudaha ay labada kooxood ku heshiiyeen, Everton loogama baahna inay bixiso wax lacag ah Spurs ilaa Alli uu 20 kulan u saftay kooxda Frank Lampard .
Alli ayaa sagaal jeer oo kaliya kasoo muuqday Everton, dhamaantoodna waxa ay ahaayeen kuwa keydka fadhiya, waxaana ciyaaryahanka khadka dhexe ee weerarka uusan ku guuleysan inuu shabaqa soo taabto ama uusan caawin.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa raadinaya waqti dheeri ah, sidaas darteed Toffees waxay u badan tahay inay iibiso Alli, kaasoo ay ku qiimeeyaan 20 milyan ginni.
Everton ayaa ku qasbanaan doonta inay Tottenham siiso 10 milyan ginni haddii Alli uu kooxda u safto 20 kulan, laakiin haddii Toffees ay Alli iibiso xagaagan, waxay Spurs ku yeelan doontaa 25% lacagta ay hesho.
Alli waxa uu khibrad weyn u leeyahay Premier League waqtigiisii ​​Waqooyiga London, halkaas oo uu u dhaliyey 67 gool, isla markaana caawiyey 61 gool 269 kulan oo uu u saftay Spurs.